Cloud တွင် cryptocurrencies နှင့် Bitco များကိုတူးဖော်ခြင်း - ငွေရှာခြင်း Gadget သတင်း
Cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေး, မိုcloud်းတိမ်၌ငွေသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိ
Michael Gaton | | Cryptocurrencies, Software များ, နည်းပညာ
သင်၌စိတ်ဝင်စားလျှင် criptomonedas ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ပြီးတော့မင်းပိုက်ဆံမဖြုန်းချင်ဘူး Bitcoins ကိုဝယ်ကြလော့, Ethereum သို့မဟုတ်အခြားငွေကြေးများဖြစ်လျှင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာသတ္တုတူးဖော်ရေးဖြစ်သည်။ The cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေး ၎င်းသည်ငွေပေးချေမှုများအား blockchain တွင်အတည်ပြုထားသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုလွယ်ကူစွာနားလည်ရန်အတွက်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာတစ်ခုသည်ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုဆက်ကပ်အပ်နှံပြီးပြန်လည်ပေးဆပ်ရသည့်အခမှာ cryptocurrencies ဖြင့်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ သင်အကြွေစေ့များကိုအမြတ်အစွန်းနှင့်မိုthe်းတိမ်မှမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုသင်ကြည့်လိုပါကဤဆောင်းပါးကိုဆက်ဖတ်ပါ။
1 Cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေး, သမိုင်းတစ်နည်းနည်း
3 HashFlare, မိုbit်းတိမ်၌အကြှနျုပျ၏ Bitcoins
4 Hashflare တွင် cryptocurrencies မည်သို့ကြေးရှာရမည်နည်း။
Cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေး, သမိုင်းတစ်နည်းနည်း
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖြစ်နိုင်သည် အိမ်မှရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းဖြင့် Bitcoins သို့မဟုတ်အခြား cryptocurrencies ကိုကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သည် နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မှာအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ မည်သည့်ကွန်ပျူတာကမဆိုဒင်္ဂါးများကိုအမြတ်အစွန်းရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အတွက်လူအချို့ကအိမ်မှအပျော်တမ်းနည်းဖြင့်စက်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာဒီမရှိတော့ဖြစ်နိုင်၏အသွင်အပြင် သတ္တုတွင်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများ အကြွေစေ့များနှင့်အတူသတ္တုတူးဖော်ရေး algorithm ၏အခက်အခဲတိုးမြှင့်အတူဤနည်းအတွက် - ထိုကဲ့သို့သော Bitcoin, Ether အဖြစ်အသုံးအများဆုံးငွေကြေးအဘို့, - ယနေ့ - ဒီလမ်းအတွက်သတ္တုတွင်းအမြတ်အစွန်းစေသည် - နှင့်စျေးကွက်သူတို့မွှုပျသောကုမ္ပဏီကြီးများကလွှမ်းမိုးနေသည်။ ဒီတာဝန်မှကြီးမားသောအရင်းအမြစ်များ။
ကျွန်တော်တို့မှာ hardware ၏ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိရုံသာမကအခြားကန့်သတ်ချက်များလည်းရှိသည်။
El အခက်အခဲတိုးလာသည်: Bitcoins တူးဖော်ခြင်း၏အခက်အခဲသည်တစ်လပြီးတစ်နှစ်တိုးပွားလာသည်။ ထို့ကြောင့် Bitcoins များအမြတ်ထုတ်နိုင်သည့်အတွက်စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲရန်ပိုမိုလိုအပ်လာသည်။
El စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်သတ္တုတူးဖော်ရေးဒင်္ဂါးများသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများစွာသုံးစွဲသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်တရုတ်၊ အိုက်စလန်စသည်ဖြင့်အမြတ်အစွန်းများသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသည့်နိုင်ငံများတွင်အမြတ်အစွန်းများစွာရနိုင်သည်။
La ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်- ပရိုဆက်ဆာများသည်သတ္တုတွင်းတူးဖော်စဉ်ကအပူအမြောက်အများထုတ်လွှတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအပူကိုဖြုန်းတီးရမည်။ ထို့ကြောင့်အအေးရာသီဥတုရှိသောနိုင်ငံများတွင်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။
ဤအကြောင်းပြချက်များကြောင့် - နှင့်အခြားသူများအနေဖြင့် - ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိုက်စလန်၊ ဖင်လန်စသည့်နိုင်ငံများတွင် cryptocrency ငွေကြေးတူးဖော်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချပြီးသား အိမ်မှတိုက်ရိုက် cryptocurrencies သတ္တုတူးဖော်ရေးအမြတ်အစွန်းမဟုတ်ပါဘူး အခုပဲ။ ကောင်းပြီ၊ တကယ်တော့အမြတ်အစွန်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ မကြာသေးခင်ကဖန်တီးထားတဲ့ cryptocurrencies ကိုလူသိနည်းတဲ့၊ စွမ်းအားနိမ့်တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲကနေသတ္တုတူးဖော်ရေးကိုခွင့်ပြုနေတုန်း၊ အမြတ်အစွန်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကနောက်ထပ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်းပါးတခုအတွက်ပေးလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိက cryptos များတူးဖော်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပြီးယခုမှအိမ်မှမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒါနဲ့ Bitcoins ကိုငွေရှာလို့မရတော့ဘူးလား။ ကောင်းပြီအဖြေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါသည်, အဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုမှ တိမ်တိုက်တူးဖော်ခြင်း o မိုဃ်းတိမ်ကိုသတ္တုတူးဖော်ရေး။ စိတ်ကူးမှာကုမ္ပဏီများသည်မကြာသေးမီကပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးကြီးမားသောအကြွေစေ့သတ္တုတူးဖော်သည့်စနစ်များကိုနိုင်ငံများတွင်အထူးပြုပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ပြီးအမြတ်အစွန်းရရှိစေသောကြောင့်ထိုကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတ္တုတွင်းကိုအဝေးမှပိုင်ဆိုင်ရန်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်းရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏ Bitcoins သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ်ရှိနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတိုက်ရိုက်စီမံရန်မလိုဘဲအခကြေးငွေပေးရမည်။
လက်ရှိတွင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသောကုမ္ပဏီများစွာရှိသော်လည်းပိရမစ်အစီအစဉ်အရသူတို့၏ဖောက်သည်များထံမှလိမ်လည်လှည့်စားသောလိမ်လည်မှုကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်ကုမ္ပဏီများကိုရွေးချယ်ရာတွင်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ ကျနော်တို့ Hashflare အကြံပြုပါသည်, အရာနှစ်အနည်းငယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သောကုမ္ပဏီအတွက်ကြောင်းကိုသက်သေပြ မင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တယ် ပြီးတော့ဘာလဲ ပိုမိုမြင့်မားသောမိုcloud်းတိမ်ကိုသတ္တုတွင်းအမြတ်အစွန်း စျေးကွက်က။
HashFlare, မိုbit်းတိမ်၌အကြှနျုပျ၏ Bitcoins
hashflare တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တိမ်တိုက်တူးဖော်ခြင်းစနစ် ၎င်းတို့သည်အိုက်စလန်တွင်တပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းကိရိယာများပါ ၀ င်သောသတ္တုတွင်းစနစ်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အိုက်စလန်တွင်စွမ်းအင်အလွန်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ရာသီဥတုအေးခြင်းတို့ကြောင့်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားစွာရရှိသည်။ ၎င်းသည်သတ္တုတွင်းပစ္စည်းများ၏အပူကိုဖြုန်းတီးစေသောကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာစေသည်။ သူတို့ကလက်ရှိတွင် Bitcoins, Ethereum, Litecoins နှင့် Dash တူးဖော်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုသည်။
သငျသညျ Bitcoins ချင်ပါသလား?
Hashflare တွင် cryptocurrencies မည်သို့ကြေးရှာရမည်နည်း။
၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးပုံရသော်လည်း Hashflare နှင့်ဒင်္ဂါးပြားများသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။ အောက်ပါအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာရုံသာဖြစ်သည်။
၁။ ဒီမှာနှိပ်ပါ။ HashFlare တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
ပြီးတာနဲ့သင်အတွင်း၌ 2.- သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ်ဝယ်ကြလော့။ ဤနေရာတွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြား cryptocurrency ကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ရန်ကွဲပြားသော algorithms များစွာရှိသည်။ အချို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ အမြတ်အစွန်းများသော်လည်း၊ SHA-256 algorithm နှင့် Bitcoins များကိုဝယ်ယူပါ.
3.- အရေအတွက်ရွေးချယ်ပါ သင်ဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောအရာ။ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၅.၅ မှဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ အထိကိုသတ္တုတွင်းလုပ်နိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုချင်းစီ၏အရင်းအမြစ်များနှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင်သင်မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
4.- ငွေပေးချေမှု Make။ သင်က Bitcoins ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် cryptocurrencies ရှိအဆင့်မြင့်မဟုတ်သောအသုံးပြုသူဖြစ်ပါကဘဏ်ငွေလွှဲသို့မဟုတ်အကြွေးဝယ်ကဒ်စသည့်ရိုးရာနည်းလမ်းများဖြင့်လည်းတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုပါကကဒ်ပေါ်ရှိသင်၏ငွေသွင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောကုဒ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုနောက်ပိုင်းတွင်အတည်ပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ရက်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။
ပြီးတော့ဒါကသင် Bitcoins တွေကိုစလုပ်နိုင်တယ် တစ်လပြီးတစ်လဝင်ငွေရှာ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲ
သင်၏ HashFlare panel တွင်သင်မြင်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ရှိသည် တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ရရှိသောဝင်ငွေ၁ လ၊ ၁ လ၊ ၆ လနှင့် ၁ နှစ်အတွက် ၀ င်ငွေခန့်မှန်းချက်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်မည်မျှအကျိုးအမြတ်ရှိသည်ကိုသင်မြင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏အကောင့်တွင် Bitcoins များစုဆောင်းပြီးသည်နှင့်သင်:
အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည် သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်မှုသည်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် Hashflare တွင်သတ္တုတူးဖော်ရေးစွမ်းအင်ပိုမိုဝယ်ယူရန်အတွက် bitcoins များကပြောကြားခဲ့သည်။
ဤ Bitcoins များကိုသင်သိမ်းဆည်းထားသောသိုမဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်သို့လွှဲပြောင်းပါ သူတို့ကိုယူရိုသို့မဟုတ်ဒေါ်လာသို့ပြောင်းပါ ပြီးတော့သင့်ဘဏ်ကိုသူတို့ကိုခေါ်သွားပါ။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, မိုfrom်းတိမ်ကနေ cryptocurrencies သတ္တုတူးဖော်ရေးအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Hashflare ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများအားကျေးဇူးတင်ပါသည် သင် $ 1,5 မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ် အထူးရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းကိရိယာများ ၀ ယ်ခြင်း၊ စနစ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး algorithm ကိုတပ်ဆင်ခြင်းစသည့်ရှုပ်ထွေးသောပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်မလိုဘဲသတ္တုတူးဖော်ရေးကိုစတင်ပါ။ ဤအရာအားလုံးကိုသင့်အတွက် hashflare ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သင်မည်မျှရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးစွမ်းအင် ၀ ယ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သာလိုသည်။ HashFlare သည်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်၊ သူတို့နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်၎င်းကိုမှတ်ထားပါ သင်ရုံကလစ်နှိပ်ပါရန်ရှိသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » Cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေး, မိုcloud်းတိမ်၌ငွေသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိ
Jose Luis Urena Alexiades ဟုသူကပြောသည်
အလွန်တာဝန်မဲ့ဆောင်းပါး။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမရှိသောထင်ကြေးများနှင့်အထက်ရှိဘဏ္cryာရေးနှင့်ပတ်သက်။ လျှို့ဝှက် cryptocurrencies အတူ။ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များထက်မာဖီးယားနှင့်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။
Jose Luis Ureña Alexiades အားပြန်ပြောပါ
Gadget သတင်း ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါဟိုဆေးလူးဝစ္စUreña Alexiades ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ သင်ဆောင်းပါးကိုမကြိုက်ဘူး၊ cryptocurrencies သည်စွန့်စားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း (သတ္တုတူးဖော်ရာတွင်စွန့်စားရမှုမှာအတော်အတန်နည်းသည်၊ ဒါကမာဖီးယားဂိုဏ်းအတွက်စျေးကွက်လို့ငါတို့မယုံဘူး၊ ၎င်းသည်အမည်ဝှက်ခြင်းအားသာချက်များကြောင့်ဂိုဏ်း ၀ င်များပါ ၀ င်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လူအများစုကဖွဲ့စည်းထားသော blockchain ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လည်းဤကဏ္။ ရှိသည်။ Blockchain သည် "သတင်းအချက်အလက်အင်တာနက်" မှ "တန်ဖိုးရှိသည့်အင်တာနက်" သို့ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းသွားမည်။ အကယ်၍ ၎င်း၏အလားအလာကိုအတည်ပြုနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာမှုနှင့်အပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ပြောင်းလဲမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
News Gadget ကိုပြန်သွားပါ
အစိုးရများနှင့်ဘဏ်များကအလားတူထင်မြင်ကြသည်။ အခွန်နှင့်ကော်မရှင်များသည်မကြာခဏဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှင့်ဘဏ်များအကြားငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင်ဘဏ်နှင့်ဖောက်သည်များ၏နောက်ကွယ်မှငွေကြေးများအကြားငွေလွှဲမှုများအတွက်ကော်မရှင်များစွာကိုအဘယ်ကြောင့်အားသွင်းရသည်ကိုရှင်းပြခြင်းမရှိသောဘဏ်၏အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ Cryptocurrency သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုမိုရှင်သန်နိုင်ပြီးကမ္ဘာကြီးသည်၎င်းနှင့်မဝေးနိုင်ပါ။
အိုမာ Valfre ဟုသူကပြောသည်
Omar Valfre အားပြန်ပြောပါ
ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်သတ္တုတူးဖော်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမယ့်အစားသင်ကြွယ်ဝအောင်လုပ်ဖို့သင့်ကိုသတ္တုတူးဖော်တယ် ဟုတ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားသင်တန်းများ / စာအုပ်များရောင်းသည့်သူများကဲ့သို့စတော့ဈေးကွက် XD တွင်သင်ကြွယ်ဝစွာရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်သည်
Michael Gaton ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ တကယ်တော့သူတို့ကတစ်လကိုလည်းမြည်းတူးတယ်။ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သတ္တုတူးဖော်တာအပြင်သူတို့ကမင်းတို့သတ္တုတွင်းလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငှားခိုင်းတယ်။
၎င်းကို ၄ င်းတို့၏ ၀ င်ငွေကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခု၊ သတ္ထုတူးဖော်ခြင်းအတွက်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းခြင်းအဖြစ်မြင်သည်
ငါဆောင်းပါးထဲမှာငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးသောပလက်ဖောင်းနှင့်ပတ်သက်။ အချို့သောသံသယရှိသည်။ သင်အဖြေပေးနိုင်မလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်:
သင်၏ bitcoins များကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ရှိရန်လိုအပ်ပါသလား။
၃.- ဘာတွေပိုလိုချင်သလဲ၊ အော့ဖ်လိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းတစ်ခုလဲ။
၁။ Hashflare ဘောင်ကိုယ်နှိုက်တွင်၎င်းသည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောစွမ်းအင်တစ်ခုစီနှင့်တစ်နေ့လျှင်သင်ထုတ်လွှတ်သောအရာအားလုံးကိုသင်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
2.- ဟုတ်တယ်၊ ထုတ်လုပ်လိုက်တာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ရှိရန်လိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Ether ကိုပိုင်ဆိုင်လျှင်သင်သည် Ether ပိုက်ဆံအိတ်လိုအပ်လိမ့်မည်။
၃.- လုံခြုံရေးအဆင့်တွင်အော့ဖ်လိုင်းသည် ပို၍ လုံခြုံမှုရှိသော်လည်းစီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ နောက်ဆုံးတော့မင်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အခြေခံပြီးငါဆုံးဖြတ်ချက်ချလိမ့်မယ်။ သင်ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းနည်းလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်၊ ရုပ်ဝတ္ထုတစ်ခုကမထိုက်တန်ဘူး၊ သင်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့။
ဟိုဆေး Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ Cloud နှင့် HashFlare တွင် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်၏ဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီး SHA-256 algorithm နှင့် Bitcoins ကိုကျွန်ုပ်ဝယ်ယူသည်အထိကျွန်ုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိမှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိမှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ပေးချေသောဒေါ်လာ ၁.၅၀ ဖြစ်သည်။ ငါကကျုံ့လျှင်။ jose အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jose Gonzalez ကိုပြန်ပြောပါ